Maleeshiyada ISIS oo nin ka shaqaynayay isgaarsiinta ku dishay gudaha gobolka Bari - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMaleeshiyada ISIS oo nin ka shaqaynayay isgaarsiinta ku dishay gudaha gobolka Bari
July 22, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Maleeshiyada ISIS oo nin ka shaqaynayay isgaarsiinta ku dishay gudaha gobolka Bari. [Sawirka: Archive]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maleeshiyada ISIS ayaa nin ka shaqaynayay isgaarsiinta ku dishay tuulada Beel-wacatay ee gobolka Bari, sida ay ku warantay idaacada maxaliga ah ee Radio Daljir oo soo xiganaysa dadka deegaanka.
Sida ay ilo-wareedku sheegeen, ninka la dilay ayaa la shaqayn jiray shirkada isgaarsiinta Golis, oo ah shirkada isgaarsiinta ugu weyn gudaha Puntland.
Dilka ayaa dhacay maalintii Khamiista, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray.
Ma cadda sababta ka dambaysa dilka ninka, balse ilo-wareedyada ayaa sheeaya in maleeshiyadu ay rabtay in ay burburiso anteenooyinka isgaarsiinta ee deegaanka.
ISIS oo sidoo kale loo yaqaan (Daacish) ayaa joogtay gudaha Puntland tan iyo sanadkii 2015, maleeshiyada ayaa ka goosatay Al-Shabaabta buuraha Galgala waxayna ku biireen ISIS isla sanadkaas.
June 25, 2017 Ugu yaraan shan qof oo lagu dilay isku dhac dhexmaray maleeshiyo deegaanka ah iyo dagaalyahanada ISIS
May 24, 2017 Dowladda Islaamiga ah oo sheegatay masuuliyada qaraxii ismiidaaminta ahaa ee Boosaaso
Guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise Cali oo sheegay in lacag dhan $530,000 laga xaday bangiga
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, Bashiir Ciise Cali ayaa sheegay in bangiga laga xaday lacag dhan $530,000 oo doolarka Maraykanka ah. Guddoomiyaha ayaa intaas ku daray in lacagta uu xaday mid kamid ah [...]